About Us - Security Cameras for Commercial & Residential
Brillion Bright Group Co.,Ltd မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ယနေ့ ခေတ်မှီတိုးတက်နေသော ခေတ်ကြီးမှာ လုံခြုံရေး ကင်မရာတွေ အထူးတပ်ဆင်လာတာတွေ ကိုတွေ့မြင်ကြမှာပါ။ လူတိုင်းနှင့်နေ ရာတိုင်းအတွက်လုံခြုံရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ အရည်အသွေးပြည့်မှီသောကင်မရာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူတစ်ယောက်စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ Auto record လုပ်ပေးနိုင်သော DVR / NVR စသည့်စက်များဖြင့် ပုံရိပ်များကိုMemory Hard Disk တွင်သိမ်းဆည်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာအရေအတွက်အနည်းအများနှင့် Memory Hard Disk Size ပေါ်မူတည်၍ Record အချိန် (နှစ်ပတ်/ သုံးပတ် /တစ်လ) စသည်ဖြင့်ကွာခြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာများကို အိမ်၊ရုံးခန်း၊ဆိုင်ခန်း ၊ အလုပ်ဌာနစသည်ဖြင့် မိမိမြင်ခြင်သောနေရာများတွင်တပ်ဆင်ပြီး Inter Net Line မိသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို မိမိ hand phone မှတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါ Billion Bright Group Security Company အနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိရဲစခန်းများ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမှုခင်းဖြစ်ပွါးနိုင်သောလမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်ကားမှတ်တိုင်များ ၊ လမ်းတံတားများ ၊ ဘဏ်များ ၊ ရွှေဆိုင်များ ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ၊ အိမ်၊ကျောင်း ၊ ဟိုတယ် မိုတယ်များ ၊ ဆေးရုံများ ၊ စားသောက်ဆိုင်များ ၊ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများ ၊ ဈေးများ ၊ ဆီဆိုင်များ ၊ အခြားသောမြို့များရှိလိုအပ်သောနေရာစုံ
များ ၊ စသည့်များပြားသောနေရာများတွင်CCTVCmera များကိုတပ်ဆင်ပေးနေပါသည်။
မြို့နယ်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်ရယူလိုသူများ ၊ ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလိုသူများ ၊CCTV Cmera Install & Service ပြုလုပ်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများအား မိမိတို့ Company မှ လိုအပ်သလို သင်ပြပြီးအကူအညီပေးသွားပါမည် ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ပစ္စည်း Warranty နှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း မိမိတို့ Company မှ အာမခံပါသည်။
Billion Bright is the best.
လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သော – CCTV Camera မျိုးစုံ နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Smart card system Parking Barrier
Card System For Gate Door
Manual System For Gate Door
Welcome to our Billion Bright Group Co.,Ltd.
To getagood opportunity without fail. In this modern time, the installation of security cameras is seen everywhere. Security is regarded as imported for men and for places. By installing high – quality security cameras in apartment and offices images are automatically recorded and stored in Memory Hard Disks of DVR/NVR. Depending on the number of security cameras and the sizes of Memory Hard Disks , recording time ( two,three weeks and one month ) is variable. Of these cameras are installed in houses,offices,shops and apartments where internet is easily accessible . All the images recorded can be seen on the screen of the hand phone.
Currently, the Billion Bright Group Security Company has installed these CCTV Cameras in Police Stations, accident – prone areas such as junctions , crossroads and bus – stops , roads and bridges, banks, jewelry shops, mills and factories. homes and schools, hotels and motels, hospitals, restaurants, condominiums, markets, petrol stations and other places in Yangon region.
We are happy to provide any necessary assistance for those who want be appointed as agents. for retail and wholesale buyers who want to open shops in their townships and states. We are also ready to provide technical training for members of the organizations in connection with installations and services of our products. Warranty and high quality of CCTV Cameras is guaranteed by our company.
Billlion Bright is the best.
Various kinds of CCTV security cameras and accessories
and other electrical accessories are available with reasonable prices on retail and wholesale basis